Midori Browser: tranokala maimaim-poana, misokatra, maivana ary haingana sy azo antoka | Avy amin'ny Linux
Midori Browser: tranokala maimaim-poana, misokatra, maivana ary haingana ary azo antoka
Manomboka amin'ny volana febroary dia hanomboka amin'ny rindranasa tsy voamarika ara-potoana ao amin'ny bilaoginay izahay. Antsoina hoe "Midori Browser", ary amin'ny ankapobeny dia safidy hafa sy mahasoa izy io Web browser izany dia teraka niaraka tamin'ny tanjon'ny maha-izy azy maivana, haingana, azo antoka, rindrambaiko maimaim-poana sy loharano misokatra, raha ny filazan'ireo mpamolavola azy.
"Midori Browser" dia amin'izao fotoana izao, vokatra maimaimpoana sy malalaka novokarin'ny fikambanana iray antsoina hoe «Astian Group» izay kosa an'ny a fototra mitovy anarana (Astian), izay vondrona fikambanana natokana ho an'ny fampandrosoana ny rindrambaiko sy ny haitao maimaimpoana ary ny fametrahana serivisy hampiroborobo sy manohana ny tsiambaratelo tanteraka sy ny fibaikoana ny vaovao.
Sidekick: mpitety tranonkala hahazoana traikefa amin'ny asa an-tserasera tsara kokoa.
Alohan'ny hitsidihako avy hatrany "Midori Browser" Tsara ny mampatsiahy anao fa ao anatin'ny tranokalanay dia manana fampidirana marobe amin'ny navigateur samihafa amin'ny kinova samihafa izahay, izay anoloran-kevitra hitady sy hamaky raha ilaina. Ohatra, ny hevitra farany dia Sidekick, izay fariparitanay toy izao:
"Sidekick dia rafitra fiasa miasa vaovao miorina amin'ny browser Chromium. Natao ho traikefa farany amin'ny asa an-tserasera, mitondra ny ekipanao sy ny fitaovanao Internet rehetra ampiarahinao ao anaty interface iray." Sidekick: mpitety tranonkala hahazoana traikefa amin'ny asa an-tserasera tsara kokoa
Sidekick: mpitety tranonkala hahazoana traikefa amin'ny asa an-tserasera tsara kokoa
Ho fanampin'izany, afaka manombana mivantana ny maro amin'izy ireo izy ireo tranokala ofisialy, mampiasa ity lisitra manaraka eto ambany ity:
0.1 Mpijery tranonkala
1 Midori Browser: Browser tranonkala hafa
1.1 Inona ny Midori Browser?
1.2 Endri-javatra sy ny asany
1.3 Fivoarana sy serivisy malalaka sy misokatra mifandraika amin'ny Midori
SRWare vy Browser
Chromium tsy misy dikany
Midori Browser: Browser tranonkala hafa
Inona ny Midori Browser?
Araka ny filazan'ny mpamolavola ao aminy tranokala ofisialy, voalaza toy izao manaraka izao:
"Midori Browser dia mpizahatany iray teraka tamin'ny tanjona ho maivana, haingana, azo antoka, rindrambaiko maimaimpoana ary loharano misokatra. Manaja ny tsiambaratelon'ny mpampiasa izany amin'ny tsy fanangonana fampahalalana na fivarotana dokambarotra manafika, hifehezana ny angon-drakitrao foana ianao, tsy fantatra anarana, tsy miankina ary azo antoka".
Ao amin'ny tranokala ofisialiny izao no andalovany kinova 1.1.4 ho an'ny Linux miaraka amin'ny installers ao ".Deb format" y «Endrika AppImage». Na izany aza, azo apetraka amin'ny saika rehetra izy io GNU / Distros Linux mivantana avy amin'ny tahiry misy anao miaraka amin'ny baiko tsotra:
Ary raha alaina, toy izao manaraka izao:
Amin'ny tranga manokana, inona no ampiasaiko MX Linux, ny kinova misy ary apetraka dia ny kinova laharana 7.0.2.
Anisany endri-javatra lehibe sy ny asany afaka miteny isika hoe:
Sehatra maro: Izy io dia manana fahaizana mihazakazaka amin'ny fitaovana desktop na finday Android, satria miaraka amin'ny Installers ho an'ny Linux, Windows, MacOS ary Android.
Tsiambaratelo sy tsiambaratelo: Manaja ny tsiambaratelon'ny mpampiasa, hatramin'ny namoronana azy «(Vondrona Astian)» manome toky izy ireo fa tsy hanao varotra ny mombamomba azy ireo, ary mampanantena koa izy ireo fa tsy hivarotra dokambarotra na mpampiasa mombamomba. Ho fanampin'izany, Midori Browser dia mampiasa ny motera fikarohana DuckDuckGO amin'ny alàlan'ny toerana misy anao amin'ny fiainana manokana.
Fandrindrana sy Cloud Storage: Izy io dia misy fampidirana amin'ny serivisy ho an'ireo mpamorona azy manokana hahatratrarana ny fampifanarahana ny angon-drakitry ny mpampiasa rehetra, izany hoe, fampahalalana, tantara, tsoratadidy, tenimiafina ary maro hafa, amin'ny alàlan'ny fanoratana farany.
Fiaraha-monina lehibe: Manana vondrom-piarahamonina marobe ankehitriny, izay toy ny amin'ny tetik'asa SL / CA hafa, dia vonona hanampy antsika ary mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny tetikasa, mampiditra endrika vaovao, manitsy ny olana ary maro hafa.
Fivoarana sy serivisy malalaka sy misokatra mifandraika amin'ny Midori
Amin'izao fotoana izao, ny mpamorona ny Midori manolotra mahaliana serivisy fandikan-teny an-tserasera (mpandika teny), loharano misokatra, izay misy fandikan-teny mandeha ho azy amin'ny fiteny maro, izay afaka ankafizintsika amin'ny fipihana eto ambany rohy.
Ary tsy ho ela dia handefa a Operating System, izay heverinay fa maimaim-poana sy hisokatra, miorina amin'ny GNU / Linux, antsoina hoe Astianina.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Midori Browser», safidy hafa ary ilaina Web browser izany dia teraka niaraka tamin'ny tanjon'ny maha-izy azy maivana, haingana, azo antoka, rindrambaiko malalaka sy malalaka; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Midori Browser: tranokala maimaim-poana, misokatra, maivana ary haingana ary azo antoka
Oktobra dia hoy izy:
Nanandrana aho ary marina fa maivana izany saingy tsy tiako ny interface misy azy indrindra mifandraika amin'ireo takelaka sy ny fomba fitantanana azy ireo, tsy hitako haingana be ihany koa eo amin'ny tranonkala, saingy izany no hevitro, iza tiako avy eo ny mampiasa azy tsy misy olana, arahaba
Valiny tamin'i Octavio
Miarahaba anao, Octavio! Misaotra anao tamin'ny hevitrao ary avelao anay ny zavatra niainanao manokana niaraka tamin'i Midori.
LibreOffice New Generation dia mitady hisarika tanora maro kokoa ho ao amin'ny LibreOffice sy ny vondron'olona malalaka
Janoary 2021: Ny tsara, ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software